ထိုင်းနိုင်ငံတွင် သေဒဏ်ချမှတ်ခံရသည့် မြန်မာနှစ်ဦးအယူခံဝင်ရေး မြန်မာအစိုးရ ပံ့ပိုးကူညီမည်
ရန်ကုန်၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၄ ထိုင်းနိုင်ငံ ကော့တောင် (လိပ်ကျွန်း) တွင် ဗြိတိသ ျှနိုင်ငံသားနှစ်ဦးအား သတ်မှုဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံ တရားရုံးက ယနေ့ သေဒဏ်ချမှတ်လိုက်သည့် မြန်မာနိုင်ငံသားနှစ်ဦး ထိုင်းနိုင်ငံ ဥပဒေနှင့်အညီ အယူခံဝင်နိုင်ရေးအတွက် မြန်မာအစိုးရက ပံ့ပိုးကူညီဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဟု ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးရဲထွဋ်က သူ၏ ဖေ့ဘုတ်စာမျက်နှာတွင်.
အလိမ်ခံရသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများက တရားမျှတမှု လိုလား
ကျော်ဖုန်းကျော် ရေးသားသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း တရားမဝင် လာရောက် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် အနာဂတ် စတော့ဈေးကွက် ပွဲစားများက လူပေါင်း ၃၀၀ ခန့်ထံမှ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ ဒသမ ၅ သန်း (ကျပ် ၁ ဒသမ ၆၅ ဘီလျံခန့်) ကို လိမ်လည်ယူသွားခဲ့မှုကြောင့် အလိမ်ခံခဲ့ရသူများက.
ယုံကြည်မှုအတွက် မေးခွန်းတစ်ရပ်ဖြစ်နေတဲ့ စောင့်ကြည့်ထောက်လှမ်းရေးလုပ်ငန်း
ဂျိမ်းစ်ကိုး ရေးသားသည်။ “သူတို့က နေ့ရော ညရောဆိုသလို ကိုယ်တော့်နောက်ကို နောက်ယောက်ခံ လိုက်နေခဲ့ပေမယ့် အခုတော့ ဘေးကင်း လုံခြုံသွားပါပြီ” လို့ Skype ဆက်သွယ်မှုအပေါ် ကြားဖြတ် နားထောင်ခြင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အရှင်ဂမ္ဘီရက ဆိုပါတယ်။ အရှင်ဂမ္ဘီရဟာ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးလို့ လူသိများတဲ့ ၂၀၀၇ သံဃာ့အရေးအခင်းမှာ ဦးဆောင်နေရာက.
James Coe နှင့် Frontier ရေးသားသည်။
လိပ်ကျွန်း (ကော့တောင်) လူသတ်မှုဖြင့် ဖမ်းဆီးခံထားရသည့် မြန်မာနှစ်ဦးအား ကွင်းလုံးကျွတ်လွှတ်ပေးရန် တောင်းဆို
ထိုင်းနိုင်ငံ၊ လိပ်ကျွန်း (ကော့တောင်) ကျွန်း၌ ဗြိတိသျှနိုင်ငံသားနှစ်ဦး အသတ်ခံရမှုဖြင့် စွပ်စွဲခံထားရသည့် မြန်မာလူမျိုးနှစ်ဦး၏ အမှုအား ဒီဇင်ဘာ ၂၄ ရက်တွင် အပြီးသတ်စီရင်ချက် ချမှတ်မည်ဖြစ်ရာ အမှုမှ ကွင်းလုံးကျွတ်လွှတ်ပေးရန် ရှေ့နေအဖွဲ့က ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက်တွင် သတင်း ထုတ်ပြန် တောင်းဆိုထားသည်။
ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာများ ကော်မရှင် စတင်စစ်ဆေးနေ
နေပြည်တော်၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၂
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ထံသို့ တိုင်ကြားထားသည့် ရွေးကောက်ပွဲ ကန့်ကွက်လွှာ ၁၇ စောင်ရှိရှိသည့်အနက် သုံးစောင်အား ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက်က ခုံအဖွဲ့ဖြင့် စတင်စစ်ဆေးနေပြီး ယနေ့တွင် နောက်တစ်စောင် စတင်နေပြီဖြစ်သည်။
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကို ကိုယ်စားလှယ်လစ်လပ်သည့်နေ့မှ ခြောက်လအတွင်း ကျင်းပဖွယ်ရှိ
လစ်လပ်သွားသည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နေရာများအား အစားထိုးရန်အတွက် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲများအား ခြောက်လအတွင်း ကျင်းပနိုင်ရန်အတွက် ဥပဒေပြင်ဆင်ချက်အား လွှတ်တော်က အတည်ပြုဖွယ်ရှိနေသည်။